न्यूजिल्याण्डले कोरोनाभाइरसलाई कसरी हरायो ? – हाम्रो देश
न्यूजिल्याण्डले कोरोनाभाइरसलाई कसरी हरायो ?
बीबीसी, न्यूजिल्याण्डमा कुनैबेला १५ सय बढी कोरोनाभाइरसका संक्रमित थिए तर अब त्यहाँ कोरोनाका एकजना पनि सक्रिय संक्रमित छैनन् । न्यूजिल्याण्डले कोरोनालाई हराएको बताइन्छ ।अब प्रश्न यो उठ्छ कि न्यूजिल्याण्डले आखिर कसरी यस्तो गर्यो ?यसको पहिलो कारण त देशमा तीब्र र व्यापक रुपमा लकडाउन लागू गरिएको थियो । देशले मार्च १९ देखि सीमा बन्द गरेको थियो, त्यतिबेला देशमा ३० जना मात्रै संक्रमित देखिएका थिए ।
त्यसको एक दिनपछि हाई अलर्ट घोषित गर्दै देशमा कडा लकडाउनको घोषणा गरियो ।पाँच हप्ताको कडा लकडाउन पछि पहिलो पटक खानेकुराका पसल र व्यापारिक प्रतिष्ठान खोल्ने अनुमति दिइएको थियो ।त्यसपछि अप्रिलको अन्त्यमा संक्रमण लगभग शून्य भयो र देश प्रतिबन्ध हटाउन सक्षम रह्यो ।भाइरस यो देशबाट बाहिरिएको जस्तो देखिन्छ तर प्रधानमन्त्री जसिन्डा अर्डर्नले सीमा तत्कालका बन्द रहने बताएकी छिन् ।